Mpivarotra Pavillons Analakely : Hanaovan’ny Kaominina antsonjay -
AccueilSongandinaMpivarotra Pavillons Analakely : Hanaovan’ny Kaominina antsonjay
Mpivarotra Pavillons Analakely : Hanaovan’ny Kaominina antsonjay
Vaky ny ady eo amin’ireo mpivarotra etsy amin’ny Pavillons Analakely sy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA). Nanambara mantsy ny fikambanan’ireo mpivarotra amin’ny Pavillon Analakely fa nomen’ny CUA alalana mivarotra eo amoron-dalana manakona ny tsenan’izy ireo ireo mpivarotra tamin’ireny « Bazar de Noël » teo ireny. Efa vita ny hetsika tsenaben’ny Noely, ary miverina mibahana eo anoloan’ny Pavillons indray ireo mpivarotra nandray anjara tamin’ny « Bazar de Noël ».
Raha ny voalaza mantsy, dia avy amin’ny kaominina ihany no mahatonga azy ireo miverina mivarotra manoloana ny Pavillons ka lasa mamono ny tsenan’ireo mpivarotra ara-dalàna anaty Pavillons. Izany hoe, tsy afaka mandroaka ireo mpivarotra tsy manara-dalàna ireo ny eo anivon’ny kaominina satria mandoa vola amin’izy ireo ireo mpivarotra. « Maka « ticket » amin’ireo mpivarotra amoron-dalana ireo ny CUA, hany ka tsy sahy mandroaka azy ireo. Tsy tsapan’ny kaominina anefa fa mamono ary manakona ny tsenanay izy ireo”, hoy ny filazana.
Marihina anefa fa manofa sy mandoa hofan-trano lafo amin’ny CUA ireo mpivarotra ao amin’ny Pavillons. Noho izany, rariny loatra izy ireo raha mitaky lamina mazava amin’ny kaominina satria mahatsiaro ho maty antoka izy ireo. Manampy izany, mbola mandoa haban-tsena ankoatra ny hofan-trano ihany koa mantsy izy ireo.
Tsy vitan’izay ihany anefa ny antsonjay ataon’ny CUA amin’izy ireo fa miketrika ny hanisy rihana ireo Pavillons ireo indray ny kaominina. Raha ny marina, milaza tsy manam-bola ny CUA nefa mahita lalam-bola hanatanterahana izany tetikasa izany. Mitsipaka izany anefa ny fikambanan’ireo mpivarotra ao amin’ny Pavillons, satria voalazan’izy ireo fa vakoka io Pavillons Analakely io ary tsy tokony ho kitikitihina sy volena rihana izany. Nambaran’izy ireo fa fanatsarana ny tafo sy ny loko ihany no tokony atao amin’ireo Pavillons fa tsy io tetikasa manimba ny vako-pirenena io indray.
Noho izay indrindra, mivondrona ary mitsipaka ny fomba fitantanan’ny CUA ireo mpivarotra ny etsy amin’ny Pavillons Analakely. Mitaky ny fanesorana haingana ireo mpivarotra amoron-dalana manoloana ny Pavillons ny fikambanan’izy ireo.
Lapan’ny tanànan’Antananarivo : Iza no tena mandainga e ???
Tontolon’ny Fitsarana : Mpitsara 10 hiakatra filankevi-pifehezana
Depiote Laisoa Jean-Pierre (Jaovato) : Manohana an’i Marc Ravalomanana
Mpamily taksiborosy : Miara-miasa amin’ny Dahalo
Hasarotam-piaro tafahoatra : Notapahiny ny loham-badiny
Musicians dans Plu commun vocabules omnicos directe
love quotes and sayings and poems dans Sortie de Air Madagascar de l’annexe B
Games dans At solmen va esser necessi far uniform lingues
kids busy dans Sortie de Air Madagascar de l’annexe B
Musicians: Hiya, I am really glad I've found this info. Today bloggers publish only about gossips and web and this is…
love quotes and sayings and poems: Hi there to every single one, it's really a nice for me to go to see this web…
Games: Of course, what a splendid website and instructive posts, I definitely will bookmark your blog.All the Best!